Ogaden News Agency (ONA) – Marwo Saado oo si heer qaran ah loogu soo dhaweeyey Nairobi
Marwo Saado oo si heer qaran ah loogu soo dhaweeyey Nairobi
Posted by ONA Admin	/ June 30, 2011
Magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya ayaa waxaa si fiican loogu soo dhaweeyey Xalay Fanaanada Wayn ee Soomaaliyeed Maewo Saado Cali Warsame. —–>Halkan ka daawo Video la duubay soo dhaweyntii Sado Cali
Saado oo safarkeedu uu ku Saabsanyahay ka qaybgalka Sanad guurada 26aad ee xuska Maalinta Xornimada Ummada Soomaaliyeed ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyey Safiirka Safaarada Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Ameerika, Jaaliyada SSC iyo Jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya ee wadanka Kenya oo ay horkacayaan Abwaano uu ka mid yahay Abwaan Mukhtaar Cagjar iyo fanaaniinta jaaliyada Ogaadeenya ee wadanka Kenya.
Marwo Saado ayaa markii ay ka soo dagtay Garoonaka waxaa joogay oo ku sugayay boqolaal dadwayne ah kuwaas oo ku dhawaaqayey – Saadoy soo dhawaw – waxaan banaanka Garoonka lagu soo bandhigay cayaarta dhaantada ah oo lagu soo dhawayn fanaanada wayn. Waxaa dhaantadaa ka qayb qaatay gabdhaha iyo wiilalasha ka tirsan Jaaliyada Ogaadeenya ee Kenya.
Fanaanad Saado oo caan ku ah hal ku dhigyada iyo wadaniyad raadinta qaranimadii soomaaliyeed ayaa waxaa soo dhaweynteeda qayb lixaad leh ka qaatay iskuna soo duba riday Soo dhawaynta fanaanada Gudigga jaaliyadda SSC iyo Jaaliyada Ogaadenya ee Magaaladda Nairobi.
Saado Cali Warsame oo ah qof ku dhex jirta Siyaasadda iyo danta guud ee ummada Soomaaliyeed ayaa waxay jeceshahay iyaddu inay mar walba dadku u arkaan hadafkeeddu inuu yahay mid guud ee uusan ahayn mid gaar ah.
Saado Cali warsame ayaa Soo dhawayntii kadib waxaa loo kaxeeyey Casho sharaf iyadda oo ay weheliyeen xubno Jaaliyadaha SSC iyo jaaaliyadda S.Ogaadeenya ka socday. Hobolada Saado Cali Warsame ayaa waxay dadka uga mahad celisay soo dhawaynta loo sameeyey, iyadoo sheegtay in ay habeen danbe kala qaybgali doonto sanadguurada 51aad ee maalinta xornimada Soomaaliya.
Habeenka Saado oo marwalba uu ka muuqdo calanka S.Ogaadeenya ayaad ka dareemaysaa sida ay uga go’ antahay waddaniyad jeceylka, Xornimada iyo Midnimada ummada Soomaaliyeed oo ay mar walba u hurto waqtigeeda qaaliga ah sidii ay ummada Soomaalieed mar un gacmaha isqabsadaan oo ay dalkooda iyo dadkoodaba ay u mideeyaan si ay u helaan kala danbeen iyo cadaalad iyo nabad waarta waligeed.